ဘလော့ |
admin မှ 22-06-23 ရက်နေ့တွင်
အဖြည့်နှင့်တံဆိပ်ခတ်စက်သည် အပိတ်နှင့်တစ်ပိုင်းအပိတ်အဖြည့်အပိန့်နှင့်အရည်ကိုလက်ခံသည်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းတွင်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိ၊ ကောင်းမွန်သောဖြည့်အလေးချိန်နှင့် ထုထည်ညီညွတ်မှု၊ တစ်ကြိမ်တည်းဖြည့်သွင်းခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းတို့ကို ပြီးမြောက်စေသည်၊ ဆေး၊ နေ့စဥ်ဓာတုဗေဒ၊ အစားအစာ၊ ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှုအတွက် သင့်လျော်သည်။ ဓာတုဗေဒနှင့် အခြား...
ဖုန်စုပ်စက် emulsifier ကိုသုံးရန် ဤအရာများကို သင်သိထားရပါမည်။
admin မှ 22-06-17 ရက်နေ့တွင်
ဖုန်စုပ်စက်သည် အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးနှင့် အလှကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းတွင် အလွန်အရေးကြီးပြီး ထူးခြားသောစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀တွင် ထုတ်ကုန်များစွာသည် ၎င်းနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေပါသည်။အလှကုန်၊ အစားအသောက်၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဝါးနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်...
တိကျသော သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပိုးသတ်ခြင်း အဆင့်များ
admin မှ 22-06-10 ရက်နေ့တွင်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကုန်စည်စီးပွါးရေးသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီး၊ high-shear vacuum emulsifier ကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ လုပ်ငန်းများစွာအတွက် ကြီးမားသော စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။အထူးသဖြင့်၊ စက်ပစ္စည်းသည် ရိုးရှင်းပြီး လည်ပတ်ရန် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါဝင်ပြီး ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်...
လေဟာနယ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော emulsifier ၏အဓိကဖွဲ့စည်းပုံမျှဝေခြင်း။
22-06-01 တွင် admin မှ
vacuum high shear emulsifier ၏ အရွယ်အစားသည် 5L မှ 1000L အထိ ကွဲပြားသည်။စားသုံးသူများသည် ၎င်းတို့၏ အမှန်တကယ် ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အရ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် emulsification ကိရိယာများကို ရွေးချယ်သင့်သည်၊ ထို့နောက် လေဟာနယ်တစ်သားတည်းဖြစ်သော emulsifier ၏ အဓိကဖွဲ့စည်းပုံကို မျှဝေပါသည်။ယနေ့တွင်၊ Gangben Machinery သည် vacuum emulsifier ၏...
ဖုန်စုပ်စက် emulsifier ၏ အနိမ့်ဆုံး လေဟာနယ်ဒီဂရီက ဘာလဲ ။
admin မှ 22-05-27 ရက်နေ့တွင်
1. လေဟာနယ်ဒီဂရီကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အများအားဖြင့် နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပြီး၊ တစ်ခုမှာ ပကတိဖိအား (ဆိုလိုသည်မှာ- absolute vacuum degree) ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်၊ နောက်တစ်မျိုးမှာ နှိုင်းယှဥ်ဖိအား (ဆိုလိုသည်မှာ- နှိုင်းယှဥ်လေဟာနယ်ဒီဂရီ) ကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။2. absolute pressure လို့ ခေါ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က v...
admin မှ 22-05-20 ရက်နေ့တွင်
1. စက်မျက်နှာပြင်၊ အောက်ခြေပြားနှင့် အောက်ပိုင်းသေသပ်လျှောပြား၊ groove၊ upper die အတွင်းဖိအားပန်းကန်နှင့် positioning rod ကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းပါ။2. စက်၏မျက်နှာပြင်၊ အောက်ခြေပန်းကန်နှင့် အောက်ဆလိုက်ပြား၏ groove နှင့် အပေါ်မှိုအတွင်းပိုင်း pres ၏ positioning rod ကို ပုံမှန်ဆေးကြောပါ...
vacuum emulsifier အကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိလဲ။
admin မှ 22-04-28 ရက်နေ့တွင်
လေဟာနယ် emulsifier ၏ ပစ္စည်းသည် လေဟာနယ်အခြေအနေတွင် ရှိနေသောအခါ၊ အဆင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော အဆင့်များကို အခြားစဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်သို့ လျင်မြန်စွာ ညီညီစွာ ဖြန့်ဝေရန်အတွက် မြင့်မားသော shear emulsifier ကို အသုံးပြုပြီး စက်မှယူဆောင်လာသော ပြင်းထန်သော အရွေ့စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသည်။ ခြံဝန်းကျဉ်း...
အလှကုန်အတွက် အသုံးများသော ပစ္စည်းများ
admin မှ 22-04-27 ရက်နေ့တွင်
အလှကုန်များသည် ကောင်းမွန်သော ဓာတုပစ္စည်းများ အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်ပါသည်။အလှကုန်ပစ္စည်းအများစုသည် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုနည်းပြီး တင်းကျပ်သော တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု လိုအပ်ချက်များရှိသည့် ပေါင်းစပ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။အလှကုန်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်- ၁။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု အီး...
လေဟာနယ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော emulsifier ၏အသုံးချမှုနယ်ပယ်
admin မှ 22-04-23 ရက်နေ့တွင်
ဖုန်စုပ်စက် တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော emulsifier သည် ရောစပ်ခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း၊ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း၊ emulsification နှင့် အမှုန့်စုပ်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ထားသော ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းတွင် လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပါရှိပြီး ပြင်ပဆီ၊ ရေအဆင့်တိုင်ကီများ၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ အပူပေးအအေးပေးစနစ် စသည်တို့နှင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် th အတွက် အထူးစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လေဟာနယ် emulsifier သည် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ မြန်ဆန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရောစပ်မှုကို မည်သို့ရရှိသနည်း။
လေဟာနယ် emulsifier ကို အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုဗေဒ နှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။လေဟာနယ် emulsifier သည် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ မြန်ဆန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရောစပ်မှုကို မည်သို့ရရှိသနည်း။တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု အာမခံချက်ပေးသော အလိုအလျောက်ပိတ်စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော...
အရည်အသွေးမြင့် လေဟာနယ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော emulsifier တွင် အဘယ်လက္ခဏာများ ရှိသင့်သနည်း။
admin မှ 22-04-14 ရက်နေ့တွင်
လူတော်တော်များများက vacuum homogenizing emulsifier ကို မသိကြဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒါနဲ့တောင် မရင်းနှီးဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ဤကဲ့သို့သော စက်ကိရိယာမျိုးသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် ဝယ်လိုအားရှိပြီး အလွန်ဝယ်လိုအားရှိသောကြောင့် လူအနည်းနှင့်အများ ကြားဖူးနားဝ၊သို့သော် လူ့အဖွဲ့အစည်း တိုးတက်မှုကြောင့်...
လူမှုထုတ်လုပ်မှုတွင် ဖုန်စုပ်စက် emulsifier ကိုအသုံးပြုခြင်းကား အဘယ်နည်း။
Vacuum Emulsifier သည် Vacuum Emulsification ဖြစ်သည်။၎င်းသည် လေဟာနယ်၏အခြေအနေအောက်ရှိ အဆင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အဆင့်များစွာကို လျင်မြန်စွာနှင့်ညီညီစွာ ဖြန့်ဝေရန်အတွက် မြင့်မားသော shear emulsifier ကိုအသုံးပြုခြင်းကို ရည်ညွှန်းပြီး ၎င်းသည် စက်မှယူဆောင်လာသော အားကောင်းသော အရွေ့စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ဒါမှ ပစ္စည်း...